लैंगिक समानता र स्वतन्त्रताको अर्थ पुरूषले बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने हो र ? :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
संसारभरिका महिलाहरूले यस दिवस मनाउन थालेको ११० बर्ष पुरा भएको छ । एक शताब्दी लामो संघर्षपश्चात पनि लिंगीयलगायत बिभिन्न भेदभाव फरक-फरक रूप र प्रकृतिमा संसारभर कायम छ ।
नेपालको संविधान- २०७२ ले शब्दमा समान अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कर्ममा विभेद जारी छ । संविधानमा जे लेखिएको भए तापनि धर्म, संस्कृति र परम्पराको नाममा महिलामाथि हुने भेदभावलाई समाजले स्वीकृति दिँदै आएको छ ।
"पुरूषप्रधान" भनेर सम्बोधन गर्दा मेरा कतिपय पुरूष साथीहरू रिसाउने गर्नु हुन्छ । मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ- "साथीहरू ! मैले कुनै पुरूष ब्यक्ति बिशेषलाई आरोपित गर्न खोजेकी होइन; केवल हाम्रो समाजमा भएको प्रवृत्तिको कुरा मात्रै गरेकी हूँ । कृपया रिसानी माफ गर्नुहोला ।"
शेयर संवाद : अनलाइन प्रणालीमा समस्या आउँदा ठूला लगानीकर्ता उम्किए, साना फसे
कतिपय महिलाहरू छोरी भएर जन्मिएकोमा ठूलो गुनासो छ आफैँप्रति । तर म छोरी भएर जन्मिएकोमा गर्व गर्दछु । किनकि, छोरी भनेका यस श्रृष्टीलाई निरन्तरता दिने सिर्जनाशक्ति भएकी आमा हुन् ।
भ्रुणदेखि नै छोरीहरूमाथि गरिने भेदभावजन्य ब्यबहारले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक बनोटमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जान्छ । म अनुरोध गर्न चाहन्छु-"आमाहरू ! भ्रुणदेखि नै अन्याय नगर्नुस् छोरीहरूमाथि । छोरीप्रति गर्व गर्नुहोस् र छोरासरह ब्यबहार गर्नुहोस् ।"
आर्थिक विपन्नताको कारण कतिपय नेपाली नारीहरू बेश्याबृत्तिमा लाग्न पनि बाध्य छन् । कतिपय होटल, रेस्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज सेन्टर अघोषित बेश्यालय बन्न पुगेको छ । प्रहरी प्रशासनकै मिलिभगतमा त्यस्ता ठाउँहरूमा यौनब्यापार भइरहेको कुरा बेलाबखत मिडियाहरूमार्फत समाचार सार्बजनिक भइरहेका छन् ।
मलाई लाग्छ स्वैच्छाले कुनै पनि सद्दे महिला बेश्याबृत्तिमा लाग्नै सक्दैन । बेश्याबृत्तिमा संलग्न महिलाहरूलाई घृणा गर्नुभन्दा सबैलाई रोजगारी उपलब्ध गराई त्यस्तो घृणित पेसाबाट मुक्त गराउन सिंगै राज्य र समाज लागि पर्नु जरूरी छ ।
छाउपडी, देउकी, कुमारी प्रथा पनि महिलामाथिको हिंसा हो । क्रमश: समाजमा आइरहेको जागरणसँगै यस्ता परम्परा घट्दै त गएको छ, तर यस्तो नियमित प्रकृयाले अझै कैयौं बर्ष नेपाली महिलाले हिंसा भोगिरहन बाध्य हुनेछन् ।
तसर्थ, राज्यले समय सापेक्ष कानुनको निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिक स्तरमा जनचेतना अभियानको माध्यमद्वारा यस्ता हिंसात्मक कुप्रथाको शीघ्र अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
समानताका नाममा असंभव कुरा माग गर्ने विकृत मानसिकता पनि हामी केही आधुनिक नारीहरूमा मौलाउँदै गइरहेको छ । यी दुबै विकृत मानसिकताबाट नारी-पुरूष मुक्त हुनु पर्दछ । कृपया ढोंग